Sanatarada Aqalka Sare oo ka xun in madaxweynaha iyo Raysal wasaarahu ka qeyb gelin furitaanka Kalfadhigooda – Kalfadhi
Xogahaya Guddiga Dib u Eegista Dastuurka Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, Xuseen Sh. Maxamuud, ayaa u sheegay Kalfadhi inuu Aqalka Sare aad uga xumaaday inuusan Madaxweynaha Soomaaliya ka qeyb-gelin Kalfadhigii Afaraad ee Aqalka Sare, oo maanta furmay.
“Waxay u muuqataa iney Madaxweynaha iyo Reysal Wasaarahuba rabin Aqalka Sare, xiriirna ka dhaxeyn” ayuu Senatar Xuseen Sh. Maxamuud ku yiri Kalfadhi. ” Mar hore ayaa la shaaciyey inuu Kalfadhigu maanta furmaayo, marka Madaxweynuhuna wuxuu iska aaday Marka, Reysal Wasaarahana Jowhar ” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Reysal Wasaare Kuxigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed, oo xukumadda ku mataliyey inuu ka qeyb-galo furitaanka Kaldadhiga Afaraad ee Aqalka Sare, ayaa sheegay iney madaxweyne Farmaajo iyo Reysal Wasaare Kheyre ugu maqan yihiin shaqo qaran magaalooyinka Marka iyo Jowhar.
” Waxaan salaan idinkaga sidaa Madaxweynaha JFS, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo rabay jeclaana inuu idinkala soo qeybgalo, si rasmiyana noogu furo Kalfadhiga Afaraad ee Aqalka Sare, laakiin sidaad ka warqabtaanba hawl qaran, oo ah fidinta amniga iyo dib u xoreynta goobaha cadawgu gacanta ku hayaan qaar ku hawlanaa, xalaynu ku hoyday, wuu ku dadaalay inuu idiin yimaado, laakiin salaan diiran ayuu idiin soo gudbiyey” ayuu yiri mudane Mahdi.
Sidoo kale, waxa uu Golaha Aqalka Sare uga cudur-daaray Reysal Wasaaraha dalka, Xasan Cali Kheyre, oo sida uu sheegay isaguna jeclaa inuu Aqalka Sare kala soo qeybgalo furitaanka Kalfadhigiisa Afaraad, balse maanta Jowhar ugu maqan safar, uu Reysal Wasaare Kuxigeenku ku sheegay shaqo qaran iyo fidinta dowlad wanaagga.
Senatar Xuseen Sh. Maxamuud ayaa u sheegay Kalfadhi in ay madaxweynaha waajib dastuuriya ku tahay inuu furo ama xiro Kalfadhiyada Golaha Shacabka Soomaaliya, oo kaliya. ” Sida ku qoran qodobka Sagaashanaad, xarafkiisa G, waxa uu Madaxweynaha JFS furayaa Kalfadhiyada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya” ayuu ku yiri Kalfadhi.